Indlela ukuxhuma WiFi, ngaphandle kokwazi iphasiwedi: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Namuhla, cishe wonke umuntu wesibili isebenzisa i-Internet. Lokhu kungaba inethiwekhi ekhaya, kanye neziteleka noma wireless evikelwe. abantu ngokuvamile abanesifiso sokwazi kungokwemvelo indlela ukuxhuma WiFi, ngaphandle kokwazi iphasiwedi? Abaningi bakwazi ukusho ngokuqiniseka ukuthi lokhu akunakwenzeka, kodwa into wukuthi akukho ngakho elula. Empeleni, ayikho into engenakwenzeka, ngakho sizokubonisa indlela yokukwenza.
Olunye ulwazi jikelele
Njengoba umkhuba ubonisa, akubona bonke usetha iphasiwedi Inthanethi yakho. Kulokhu, awudingi baziqambela lutho, futhi ungakwazi ukuyisebenzisa ngokukhululekile ngaphandle ukukhathazeka mayelana it futhi sifunde uxhumano zaparoleny. Phawula ukuthi, isibonelo, izinkampani ezinkulu cishe ungalokothi ubeke ukuvikelwa, kuyaqondakala ukuthi kungani abantu zingavumi kakhulu, futhi uphethe kufakwa. Kodwa sinawo isimo ezahlukene: the umakhelwane okubi usethe iphasiwedi, futhi sifuna ukuya ku-intanethi. Into yokuqala, qinisekisa ukuthi iphasiwedi kuwufanele. Ukuze wenze lokhu, vele ufake noma iyiphi inhlanganisela, uma uxhumano uphazanyiswa, khona-ke sidinga sniffer. Vele, sizobe ukukhuluma ngakho.
Indlela ukuxhuma WiFi, ngaphandle kokwazi iphasiwedi
Ukuze wenze lokhu, udinga ukulanda isofthiwe ekhethekile. Njengoba kuphawulwe ngenhla, sizosebenzisa a sniffer - uhlelo injongo eyinhloko - ukubamba amaphakethe ulwazi. Manje itholakala mahhala kwi-inthanethi kukhona lonke kweqembu Izinsiza ezifanayo, isibonelo, Shark. Ukubhekana isofthiwe ngeke kube nzima. Uma ukwenza kokuqala, uzoqaphela ukuthi ungakwazi ukubamba eziningi imininingwane ewusizo. Lapha ungathola Ip-ikheli idatha umamukeli bese empeleni, umthumeli. Ngokusekelwe lokhu, sizokwazi ukumisa kukhompyutha yakho ukuxhumana ngempumelelo. Ngomqondo onabile, esikhathini esizayo esiseduze, sizosebenzisana ne-IP amakheli. Kodwa kungcono akulula njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Okokuqala, inthanethi wireless, okuyinto siye wabutha Hack kufanele asebenze. Okwesibili, kuyoba kuhle, uma isetshenziswa kabanzi, ngenxa yokuthi ngalesi sikhathi udluliselwa omningi amaphakethe ulwazi, futhi thina into kuphela lokho okudingayo.
WiFi-router: Iphasiwedi - akunankinga
Ngakho, ake uzame ukushintsha ikheli inethiwekhi computer yethu. Lokhu kwenziwa ukuze uyenze ibe "bomdabu" ukuze router. Lapha okuningi kuxhomeke kulokho yesistimu yokusebenza oyisebenzisayo. Nakuba isimiso uyefana. He is a ikheli inethiwekhi ikhompyutha noma laptop kwaba nse router. Noma kunjalo, idijithi yokugcina kumele kwesokunxele azizange zishintshe, sikhuluma ikheli inethiwekhi ehlukile. Subnet buso, awukwazi ukushintsha futhi akukashintshi. Njengoba isibonelo engokomfanekiso, ake ulwazi olulandelayo. Ngosizo sniffer uthola ikheli 192.168.5.2 elandelayo,, une 255,255 futhi subnet buso. 255,0. Ikheli lakho, nenza nse, kodwa lesi sibalo yokugcina uhlala ingashintshiwe, futhi ushiye imaskhi kuyafana, nakuba ngokuvamile okufanayo. Ngomqondo onabile, thina cishe ayikwazanga ukuxhuma ku-WiFi. Ngaphandle iphasiwedi, lokhu akunakwenzeka, ngakho-ke kuyadingeka ukuba inqamuke.
Yokugcina deprotection isinyathelo
Ngakho, amakheli waqonda. Njengoba ungase uphawule, lutho nzima lapha. Thina kwesokunxele nge kancane kakhulu ukukwenza, bese ungakwazi ukujabula. Okokuqala, kufanele uthole Kuyaphawuleka iphasiwedi cracker. Ngakho indlela ukuxhuma WiFi, ngaphandle kokwazi iphasiwedi hhayi ukukuhlephula, akunakwenzeka ukuba kwenzeke. Lezo zinhlelo eziningi kangaka. Iningi lazo kungukuthi okuqondiswe kuvulwa ukuvikelwa inthanethi wireless, futhi amaphasiwedi e-akhawunti e imidlalo, ukuxhumana nomphakathi kanye nokunye. N. Noma kunjalo, akufanele ukusizakala software efana Comm Viev-Wi-Fi. Okusetshenziswayo khulula ngokuphelele futhi kulula kakhulu ukusebenzisa. I interface enembile uzokusiza ayiqonde. Kodwa into wukuthi yonke idatha sesivele sinalo. Leli kheli le-inethiwekhi ulwazi iphakethe router. Khona-ke nonke uzokwenza uhlelo. Ukuze iphasiwedi WiFi usungula inhlanganisela ezahlukene izinhlamvu nezinombolo, kodwa ngezinga yokuvikela incike indlela ukubethela.
Njengoba sekushiwo ngenhla, okuningi kuncike ngezinga elithile Ukuvikelwa ukuthi kukhethwe inketho ukubethela. Njengamanje bobathathu. Uma usebenzisa into efana WPA noma i-WPA-2, bese wena cishe ukuthola okuthile, uma kuphela ngenxa yokuthi awukwazi ukubona inethiwekhi, ngisho kalula uma wazi kahle ukuthi kuyini. Kulokhu, ungenawo asize dancing ne ithamborini, lapha kubalulekile ingxenye kubaduni professional, namasevisi afana kahle, ngakho-ke kunengqondo ukucabanga sekufanele awushiye nekilasi ezinjalo. Uma thina lapha asikhulumi ngama-olunzulu oshwabadelayo womgwaqo, khona-ke kungenzeka ukuthi kulula ubuze umnikazi iphasiwedi. Amathuba zinhle ukuba uyovuka awunankinga, ikakhulukazi uma udinga ukufinyelela emsebenzini noma ukufunda, kodwa hhayi ukulanda 20 gigabytes ngelanga amafilimu. Nokho, yilokho kungathiwani mayelana nendlela ukuxhuma WiFi, ngaphandle kokwazi iphasiwedi. Akukho inkinga enkulu, kodwa ngezinye izikhathi ke akwenzi mqondo, futhi imizila ngempela zanamuhla avikelekile thembeke, ngakho-ke kunzima kakhulu "ukuvula". Kodwa uma ngempela kudingeka, ungazama.
Uyini webinar? Ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo yaleli fomu yokufunda
Indlela ukudlulisa izithombe kusuka efonini yakho kuya kwi-TV yakho? Imiyalelo. Miracast ubuchwepheshe
Indlela ukungena iPhone e DFU-mode
Indlela ukubuyisela ithebhu evaliwe. A amasu ezilula ezimbalwa
Indlela yokuthola IP-ikheli yithuluzi Inthanethi?
Yiziphi ikhadi umsindo?
Indlela ubuyekeze i ikhabethe ubudala: nemibono. Ukubuyiselwa iKhabhinethi ubudala
Amakhono yenhlangano - siyini lesi futhi kanjani ukuthuthukisa kubo?
Kuyini amasosha omzimba zokubonisana kanye ngubani anazo ke?
"Renault Kumnandi" - ukubuyekezwa kanye izici abanikazi imoto
Inkukhu isitayela saseMexico